Faritra Analanjirofo Misy olana eo amin’ny minisitry ny mponina sy ny depiote
Nivoaka ampahibemaso amin’izay ny olana misy sy ny ady mangatsiaka ifanaovan’ny minisitry ny mponina Naharimamy
Irma Lucien sy ny solombavambahoaka no filoha lefitry
ny antenimieram-pirenena avy amin’ny faritanin’i Toamasina Rtoa Bavy Angelica Michelle. Niseho izany taorian’ny filankevitry ny minisitra farany teo ary nanaovan-dRtoa Bavy Angelica Michelle fanamarihana ara-piaviana mihitsy ny fanendrena nataon’ny
minisiteran’ny mponina ny olom-panjakana ao aminy. An-kilan’izay dia mampiteny ny anarany amin’izay fanendrena atao ny filankevitry ny minisitra Ramatoa depiote, fa toa hoe tsy maintsy mandalo eo ambany masony ny anarana mialoha ny handrosoana izany eo anivon’ny filankevitry ny minisitra. Fanendrena mpiasam-panjakana ambony ao amin’ny faritra Analanjirofo, indrindra fa ny ao Fenoarivo Atsinanana no resaka eto. Nomarihan’ireo mponina any an-toerana anefa fa izao ataon’ny depiote sady filoha lefitry ny antenimieram-pirenena izao ihany no nahatonga ny vahoaka efa nitsipaka ny kandida notohanany nandritra ny fifidianana ben’ny tanàna teo, ka nahatonga ny mpifidy nanohana kandida tsy miankina. Miahiahy ny mponina any an-toerana fa hisy fiantraikany ratsy amin’ny fampandehanana ny asam-panjakana any sy ao amin’ny faritra Analanjirofo izao ady mangatsiaka eo amin’ny samy goavana izao.